နိုင်ငံတကာ, 03 ဒီဇင်ဘာ 2018
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၄၁ ယောက်မြောက် သမ္မတဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ပြီးခဲ့တဲ သောကြာနေ့က ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက် ၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်က လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို တနိုင်ငံလုံးကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်နေ့အဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့ကျင်းပမယ့် NATO အဖွဲ့စည်းဝေးပွဲမှာ ယူကရိန်းရေတပ်သင်္ဘောတွေ ရုရှားဖမ်းထားတဲ့ကိစ္စကို ဦးစားပေးဆွေးနွေးကြမယ့်ပုံရပါတယ်။
၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလကစပြီး ရေနံထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC ကနေနုတ်ထွက်တော့မယ်လို့ Qatar နိုင်ငံက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ခရစ်ယာန် ဂျကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့ လူပေါင်း တသိန်းလောက် တနင်္ဂနွေနေ့က ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
သောကြာနေ့က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၄၁ ဆက်မြောက်သမ္မတ George H.W. Bush ကို ဂါရဝပြုနိုင်ဖို့အတွက် ကျွင်းကျန်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကို တနင်္လာနေ့ ညနေကနေ စပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစောပိုင်းအထိ ဝါရှင်တန်ဒီစီက လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဗဟိုခန်းမကြီးမှာ ဂုဏ်ပြုထားရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဟာ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိနေကြောင်း ပိုလန်နိုင်ငံမှာ စတင် ကျင်းပတဲ့ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ညီလာခံအစမှာ ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Patricia Espinosa က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကန်-မြောက်ကိုရီယားထိပ်သီး နောက်နှစ်ဆန်း ပြန်တွေ့ဖွယ်ရှိ
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီ ဒါမှမဟုတ် ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာ တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင်တယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြမှု ကိုင်တွယ်ဖို့ ပြင်သစ်သမ္မတ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူ
ပြင်သစ် သမ္မတ Emmmanuel Macron ဟာ ၊ ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတရပ်ကို ဒီကနေ့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံ ၂၀ ရဲ့ G-20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်း အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump နဲ့ တရုတ် သမ္မတ Xi Jinping တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အင်အား အကြီးဆုံး နှစ်နိုင်ငံကြား သဘောတူညီချက်လေး တခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။